Fundraising for Sasanaramsi Vihara
14 Jan 2012, Saturday
St Agnes R C Church
Entrance fees: £7 including Buffet (as much as u can eat)
Behalf of Sasanaramsi Vihara
For ticket plz call Colindale Monestry @ 02082050221
Saw Yan Naing: 0780503245
Zarne Ko Ko: 07576607122
Ticket can also available at the entrance
Sharing: မစိုးရိမ်ဆရာတော် မိန့်ကြားတော်မူသော "အကြွားမလွဲနဲ့" သြ၀ါဒကထာ
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁-ရက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဖလော်ရီဒါထေရ၀ါဒဓမ္မအသင်းတည်ထောင်ခြင်းနှင့် သီတဂူသံဃ၀ိဟာရ ကျောင်းလွှတ်ပူဇော်ပွဲ၌ မစိုးရိမ်ဆရာတော် မိန့်ကြားတော်မူသော အကြွားမလွဲနဲ့ သြ၀ါဒကထာ ---------------------------------------------------------
ဘုရားရှင်က တိုင်းပြည်တိုးတက်ဘို့အတွက် အသင်းအဖွဲ့တွေတိုးတက်ဘို့အတွက် ဟောကြားခဲ့တဲ့ တရားတော်တွေကို မှီငြမ်းပြုပြီးတော့ မဃဒေ၀လင်္ကာမှာ ဆရာတော်ကြီးက “မင်းနှင့်ပြည်သူ ရှင်လူဒကာ ပွင့်လင်းသာလျှက်၊ မေတ္တာမပျက်၊ စောင့်ရှောက်ဖက်မှ၊ တိုးတက်ကြီးပွား၊ ချမ်းသာများလိမ့်”တဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဆိုရင် အုပ်ချုပ်တဲ့ ရှင်ဘုရင် အစိုးရပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ ပြည်သူဆိုတဲ့ အုပ်ချုပ်ခံလူတန်းစား အဲဒီနှစ်ဦး မေတ္တာမပျက်မှ ကြီးပွားတိုးတက်တယ်တဲ့။ ဘာသာရေးမှာလည်း “ရှင်လူဒကာ ပွင့်လင်းသာလျှက်”တဲ့ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် တွေ၊ လူဒကာ ဒကာမတွေဟာ “မေတ္တာမပျက်၊ စောင့်ရှောက်ဖက်မှ၊ တိုးတက်ကြီးပွား၊ ချမ်းသာများလိမ့်” လို့ မန်လည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက မဃဒေ၀လင်္ကာမှာ ဆုံးမထားတယ်။
ဒီလင်္ကာအဆုံးအမအတိုင်းပဲ ဒကာ ဒကာမနဲ့ သီတင်းသုံးမယ့်ဘုန်းကြီးများ မေတ္တာမပျက်ဘဲနဲ့ သာသနာ ပြုသွားကြဘို့ အရေးကြီးတယ်။ ဘုန်းကြီး…
Facebook နှင့် Twitter တို့ကြောင့် ပင်ကိုယ်သရုပ် ပျောက်နေသည့် မျိုးဆက် ဆောင်းပါအား ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ခြင်း
ယခုပို့စ်သည် မောက္ခသတင်းပါ ဘာသာပြန်ဆောင်းပါးအား ကျွန်တော့်အမြင်ဖြင့် (အနီရောင်စာသား) ပြန်လည်သုံးသပ်တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်နှင့် တွစ်တာစသည့် လူမှုကွန်ယက်များကို အသုံးပြုနေသည့် မျိုးဆက်များမှာ စိတ္တဇ ဆန်ဆန် ပြုမူ တတ်ကြခြင်း၊ အာရုံ စူးစိုက်ချိန် လျော့နည်းလာခြင်းနှင့် ရှင်သန်မှုတွင် ကလေးငယ်များကဲ့သို့ အထောက်အကူ လိုအပ်ခြင်း တို့ကို ရင်ဆိုင် နေရပြီဖြစ်ကြောင်း ထိပ်တန်း သိပ္ပံပညာရှင် တစ်ဦးက ထုတ်ဖော် ပြောကြားလိုက်သည်။
မျိုးဆက်သစ် Teenage ပိုင်းတွေကိုတော့ မိဘတွေအနေနဲ့ အချိန်ပေးပြီး ထိန်းသိမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့တော့လိုပါတယ်။ Carrot and stick ပုံစံသွန်သင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ Facebook နှင့် Twitter သာမက Youtube ကဲ့သို့သော website တွေမှာ underage မကြည့်သင့်သည်များကို မကြည့်မိစေဖို့ မိဘတွေအနေဖြင့်လည်း Computer Knowledge ရှိသင့်ပြီး security software မှာပါဝင်သင့် Parental Control ဖြင့် မိမိကလေးငယ်၏ online ဝင်ရောက်မှု့ကို စောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။
အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်၊ ဆေးဝါးဗေဒဌာနမှ ပါမောက္ခ Baroness Greenfield က အင်တာနက်ပေါ်တွင် “သူငယ်ချင်းများ” တိုးပွားလာနေပုံ၊ ကွန်ပျူတာဂိမ်းမ…
British Museum သွားတုန်းအပေါက်ဝ ဝင်ဝင်ချင်း Building ကိုရိုက်ထားတဲ့ပုံပါ။ အဲဒီနေရာဟာ လန်ဒန်ကိုရောက်လာသူတိုင်း သွားရောက်လေ့လာသင့်တဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ လူမျိုးစုံ သမိုင်းစုံကို တစ်နေရာတည်း အချိန်ပေးပြီး လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဒီမှာနေတာ နည်းနည်းကြာနေတာ တစ်ခေါက်ပဲရောက်ဖြစ်သေးတယ်။ ထပ်သွားဦးမယ်။
Asia section မှာရှိတဲ့ မြန်မာ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကို သွားလေ့လာဦးမယ်။ ကျွန်တော်ရောက်တုန်းက အခန်းတစ်ချို့ကို ပိတ်ထားတာတွေ့ရတယ်။ ပစ္စည်းတွေကျန်ဦးမယ်ထင်တယ်။ ဒီနေရာထက် Victoria ပြတိုက်က ပိုစုံတယ်လို့သိရတယ်။ ဒီလို မြန်မာ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကို တပါးသူရဲ့ ပြတိုက်မှာ မြင်လိုက်ရတော့ စိတ်ထဲမှာ ဒေါသထွက်သလိုဖြစ်မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ဘက်က စဉ်းစားတော့လည်း သူတို့လက်ထဲရှိလို့သာ အခုချိန်ထိ အကြာကြီးထိန်းသိမ်းထားနိုင်တာ မြန်မာပြည်မှာရှိလို့ကတော့ ပျက်စီးရင် ပျက်စီး မပျက်စီးရင် ဘယ်သူဌေးအိမ်မှာ ရောက်သွားမလဲ မပြောတတ်ဘူး။ ဒေါသထွက်ရင်း ကျေးဇူးအနည်းငယ်တင်နေမိတယ်။
မြန်မာပြည်မှာတော့ ဦးပိန်တံတားကို အုတ်နဲ့ပြန်ဆောက်တယ်။ အတုမရှိ ရွှေကျောင်းကြီးကို ရှေးလက်ရာဖျက် ပြန်ပြင်တယ်။ ရှေးဟောင်းလက်ရာ အမွေအနှစ်ဆိုတာ ဘာမှမကျန်တော့ဘူး။ မန်းလေး…
Burma Event: Rock and Costume Party Night
Burma Event: Myanmar Christian Fellowship's Myanmar Food Fair
We cordially would like to invite you and your friends to join the Myanmar Christian Fellowship's Myanmar Food Fair.
Date : 20.08.2011
Time : 15:00pm to 18:00pm
Place : St John's Church, Mattock Lane, West Ealing, London, W13 9LA
Programme: Taste, Culture Food and Entertainment
Tickets: Adult= £7, Children (age 5-10) = £3(children tickets will be available at entrance), Children (under 5) are free.
A variety of delicious Myanmar food including drinks and deserts are inclusive of the above fares.
You can enjoy the live entertainment with your friends and family.
Please support our fund raising event.
Burma Food Fair (London,UK)
Burma Event: 23rd Anniversary of 8.8.88 Massacre
Please come and join with us to show your support for Burma and protest together. Global Day of Action as well as Global Resistance Day for Injustice, 8.8.11 is the 23rd anniversary of 8.8.88 massacre, during which military gunned down more than 3000 peaceful demonstrators in Burma.
Time: 13:00- 1…
Burma Event: Demonstration at German Embassy on 8 August 2011
On 8 August 2011, on the 23rd anniversary of the 8.8.88 uprising, we are holdingademonstration in front of the German Embassy in London to call on Germany to stop blocking the European Union supporting the establishment ofaUN Burma inquiry. Shamefully, Germany is putting its business interests before human rights by trying to stop an Inquiry. In effect, they are protecting rapists and war criminals in Burma.
On 8 August 1988, more than 3000 peaceful demonstrators in Burma were killed by the dictatorship just for calling for democracy.
Venue: Outside German Embassy, 23 Belgrave Square, London SW1X 8PZ
The nearest Tube stations: Hyde Park Corner (Piccadilly Line) and Sloane Square (District).
ကိုထိန်လင်း (ပန်းချီဆရာ) နှင့် Vicky Bowman (Former British Ambassador to Burma) တို့ရဲ့ သမီးငယ်လေးပါ။ Oxford က အသိတစ်ယောက်ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်သွားတုန်း ရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးငယ်ရဲ့ မျက်နှာပေါ်က လိပ်ပြာလေးကတော့ သူ့အဖေပန်းချီဆရာရဲ့ လက်ချက်ပေါ့ :) သမီးငယ်လေးက အရမ်းသွက်လက်ပြီး မူလတန်း မြန်မာကဗျာတိုကလေးများကို လက်တမ်းရွတ်ဆိုနိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ Vicky ဟာဆိုရင်လည်း မြန်မာစကားကို ကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ပြီး မြန်မာလူမျိုးများနှင့် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ချစ်ခင် မြတ်နိုးသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
Nikon Camera ကြော်ငြာတွေရဲ့ နောက်ခံသီချင်းလေးပါ။ သီချင်းဆိုတဲ့သူ ရုပ်ဆိုးတယ်လို့ ပြောကြပေမဲ့ သီချင်းစာသားနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ တီးလုံးကတော့ အရမ်းကိုကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း Nikon Fan ဆိုတော့ သီချင်းလေးကို ပိုပြီးကြိုက်သွားတာပေါ့ဗျာ။ ဒီနှစ်ပိုင်းမှာ စိတ်ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေတော်တော်ရိုက်ဖြစ်ဗျ။ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ကင်မရာတစ်လုံးလွယ်ပြီး မြင်ကွင်းထဲပေါ်လာတာလေးတွေကို ခလုတ်လေးနှိပ်လိုက်ရတာကိုက ကျွန်တော့်အတွက် အပန်းဖြေနည်းတစ်ခုလို ဖြစ်နေတယ်။ (ရူးတာ)
ပန်းပွင့်လေးတွေ၊ လူတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုပုံတွေ နဲ့ သဘာဝရှူ့ခင်းတွေကို ရိုက်ရတာပိုပြီး သဘောကျတယ်။
ကျွန်တော့်ဓာတ်ပုံတွေကို ဝေဖန်အကြံပေးချင်ရင်တော့ ဒီနေရာမှာ ကြည့်ရှူ့နိုင်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေသည်လည်း Nikon Fan ဆိုရင်တော့ Blog ရဲ့အောက်ဆုံးမှာ Nikon နှင့်ပက်သက်ပြီး အသုံးဝင်တဲ့ site တစ်ချို့ကို စုစည်းပေးထာပါတယ်။ Have fun shooting with Nikon ;)
တခါတလေ ကျွန်တော်တို့ ဓာတ်ပုံတွေကို မေးလ်ပို့တဲအခါမှာဖြစ်ဖြစ်၊ အင်တာနက်ပေါ် upload လုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ် file size ကြီးနေလို့ ပြဿနာဖြစ်နေတာမျိုး ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အဲလိုအခါမျိုး ဖြစ်လာခဲ့ရင် ယခု Post သည် အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရဲ့ file size ကို အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အရိုးရှင်းဆုံး ချုံ့ပြတဲ့နည်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါ video မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံတစ်ပုံချင်းစီအတွက် Microsoft Paint ထဲမှာ အဆင်ပြေပေမဲ့ ဓာတ်ပုံပေါင်းများစွာ(Multiple Photos)ကို ပြုလုပ်ချင်ရင်တော့ Photoshop ထဲက Image Processor သို့မဟုတ် Batch ကိုအသုံးပြုရပါလိမ့်မယ်။ အောက်ပါ Video မှာ ရှင်းပြထားပါတယ်။
Batch Resize Images in Photoshop from Jerad Hill on Vimeo.
၁၉ ဇူလိုင် မမေ့နိုင်
ဒီကနေဟာဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ လုပ်ကြံခံရတဲ့ သမိုင်းဝင်တဲ့ အာဇာနည်နေ့ဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်ဟာ ၆၄နှစ်မြောက် ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့ အစိုးရရုံးပိတ်ရက်တစ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ထင်တာ မမှားဘူးဆိုရင်တော့ ဒီနေ့လိုနေ့မျိုး မြန်မာပြည်မှာ မိုးဖွဲဖွဲလေးတွေ ရွာနေတတ်ပါတယ်။ လူလတ်ပိုင်းအရွယ်တွေအထိ အာဇာနည်နေ့သမိုင်းကို ဂဃဏနသိပေမဲ့ တစ်ချို့လူငယ်ပိုင်း (၁၆နှစ်အောက်) တွေကတော့ အာဇာနည်နေ့ဆိုတာကို ဝေတေဝါးတားဖြစ်နေတာ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။
တိုင်းပြည်ကို လွတ်လပ်ရေးရအောင် မိမိကိုယ်ကျိုးကိုစွန့်လွှတ်ပြီး ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ အာဇာနည်တွေကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေ မေ့ပျောက်နေမယ်ဆိုရင် သမိုင်းကိုမေ့ပျောက်နေတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ သမိုင်းပျောက်ရင်တော့ လူမျိုးပါ ပျောက်ကွယ်ဖို့ဆိုတာ မဝေးတော့သလိုပါပဲ။
အခု မြန်မာပြည်မှာဆိုရင် စစ်အာဏာရှင် လက်ထက်ကစပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမိုင်း၊ ဓာတ်ပုံတွေကို မေ့ပျောက်အောင် တစတစပြုလုပ်လာတွေ တွေ့မြင်လာရပါတယ်။ အဆိုးရွားဆုံးကတော့ နိုင်ငံတော်ငွေစက္ကူတွေမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတွေ၊ ဆရာစံတို့လိုခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကိုပယ်ဖျောက်ပြီး တိရစ္ဆာန်ပုံတွေကိ…
အလေးပြုပါသည် by မေလှမြိုင် (ရေး-ဂစ်တာတင်အုံး)
လာမည့် အင်္ဂါနေ့ (၁၉.၀၇.၂၀၁၁) ဆိုရင် ၆၄ ကြိမ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ကို ရောက်ပြန်ပြီ။ တိုင်းပြည်အတွက် အသက်ပေးဆပ်သွားတဲ့ အာဇာနည်ကြီးတွေကို ယနေ့တိုင် ဘယ်သူမှ မေ့ပျောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အာဏာရူးအုပ်စုတွေကတော့ အာဇာနည်တွေရဲ့ကျေးဇူးကို မသိတဲ့အပြင် ကျေးဇူးကန်းနေတာ နှစ်ပေါင်းကြာပါပြီ။ အဆိုးဆုံးကတော့ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကို အာဇာနည်နေ့၊ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေ အကြောင်းကို မေ့ပျက်အောင်လုပ်ပစ်နေခြင်းပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ (မြန်မာပြည်မှာနေထိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ ပြည်ပမှာနေထိုင်သည်ဖြစ်စေ) မျိုးဆက်သစ်လူငယ်လေးတွေကို အာဇာနည်နေ့အကြောင်းကို ပြောပြပြီး အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ ကျေးဇူးကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ပြန်လည်ပေးဆပ်သင့်ပါတယ်။ အရှင်းဆုံးပြောပြီး လူငယ်တွေကို ရှင်းပြ ပြောပြချင်တာကတော့ "အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့တတွေလူတစ်လုံး သူတစ်လုံးနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လူဖြစ်ပြီးကြီးပြင်းလာရတာ။ မဟုတ်လို့ကတော့ ခုချိန် ဘယ်ဘဝမှာပဲ ရှိဦးမယ်မသိဘူး။" ဒါကတော့ ကျွန်တော့်အတွက် အရှင်းဆုံး ဥပမာပါပဲ။
အာဇာနည်နေ့မှာ အာဇာနည်ကြီးတွေအတွက် ရည်စူးပြီး ကောင်…
TinEye tries to do that and the best part is that it mostly succeeds. The new image search engine, powered by Idée's technology and currently in private beta, has an index of 487 million images (Google's index is at least 12 times bigger) and manages to find identical versions of an image or alterations. "TinEye frequently returns image results with colour adjustments, added or removed text, crops, and slight rotations. TinEye can also detect images that are part ofacollage or have been blended with another image."
Nikon ကနေ ကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲပါ။ ဒီလအတွက် ပြိုင်ပွဲခေါင်းစဉ်ကတော့ Reportage တဲ့။ ဓာတ်ပုံဝါသနာပါသူ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအားလုံး ပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်အောင် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လို့ ဝါသနာအိုးအနေနဲ့ကတော့ လက်တဲ့စမ်းရင်း ဝင်ပြိုင်မလို့ စဉ်းစားထားတယ် :P ဆုမရလဲ အရင်းပေါ့ ;)
ဓာတ်ပုံတင်သွင်းရမည့် နောက်ဆုံးရက်က ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုကတော့ Nikon D3100 ကင်မရတစ်လုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
This month's theme is 'Reportage', so submit your interpretation of that before 16 June and you could win! (Nikon D3100)
မြတ်ဗုဒ္ဓသည် ကဆုန်လပြည့်နေ့တွင် ဒီပင်္ကရာဘုရားခြေတော်ရင်းနှိုက် သဗ္ဗညုတ ဘုရားအဖြစ်ကို ရရှိဖို့ရန် ဆုပန်တော်မူခြင်း၊ ၄င်းကဆုန်လပြည့် သောကြာနေ့တွင် ဖွားမြင်တော်မူခြင်း၊ ၄င်းကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ကိလေသပရိနိဗ္ဗာန် စံတော်မူခြင်းတည်းဟူသော သစ္စာလေးပါးနှင့်တကွ အလုံးစုံကုန်သော တရားတော်များကို အကုန်အစင်သိမြင်သော ဘုရားအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိတော်မူခြင်း၊ ၄င်းကဆုန်လပြည့်တွင် ခမည်းတော် သုဒ္ဓေါဒနမင်းကြီးနှင့်တကွ သာကီဝင်မင်းအပေါင်းတို့အား ဘုရားဖြစ်စဉ်ဗုဒ္ဓ၀င်ကိုဟာတော်မူခြင်း၊ ၄င်းကဆုန်လပြည့် အင်္ဂါနေ့တွင်ပင် ခန္ဓပရိနိဗ္ဗာန် စံတော်မူခြင်းတည်းဟူသော ပရိနိဗ္ဗာန် စံတော်မူခြင်းတို့ကြောင့် ဒီကဆုန်လပြည့်နေ့ကို ဗုဒ္ဓနေ့ဟု ရှေးပညာရှင်များ က ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့ကြပါသည်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့တွင် နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သည့် အဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် ဗုဒ္ဓနေ့ပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခမ်းအနားသို့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံကျောင်းပေါင်းစုံမှ ဆရာတော်များ နှင့် တပည့်ဒါယကာ ဒါယိကာမများ စုံလင်စွာ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အခမ်းအနားကို မနက် ၁၀ နာရီတွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အခမ်းအနားအစီအစဉ် ပထမပိုင်းတွင် ဓမ္မတေးများ၊ ကဗျာများ…
Be aware of Facebook Survey Scam : "How to see who viewed your profile!!"
Facebook သုံးနေရင်း ကိုယ့်ဆီကို ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ Wall ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ် "How to see who viewed your profile" ဆိုတဲ့ Event invitation တွေ့ရင် သွားမနှိပ်မိပါစေနဲ့။ ကျွန်တော့်ဆီကို ဒီတစ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်း ခဏခဏရောက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ Firefox မှာ install လုပ်ထားတဲ့ WOT security extension ကနေ အနီပြနေတဲ့အတွက် သွားမနှိပ်တော့ဘူး။ အဲဒါ spamware တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ယောင်ပြီး နှိပ်မိရင်တော့ မိမိကို စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Spamware ရဲ့ ပုံစံက Facebook Wall မှာ အခုလိုပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Facebook Wall မှာ အထက်ပါပုံစံလိုမျိုးတွေ့ခဲ့ရင် အဲဒီ post ပေါ်မှာ Mouse Rollover လုပ်ပြီး x ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးရင် Mark as spam ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။ ဒါမှ နောက်လူတွေလည်း မထိတော့မှာလေ။
တကယ်လို့ နှိပ်မိပြီး မိမိစက်ထဲကို spamware ရောက်နေပြီလို့ ခံစားနေရရင်တော့။ Malwarebytes Anti-Malware ကိုသုံးပြီး စက်ကို scan လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် အောက်ပါ Video မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း Privacy setting တွေကို ဝင်ပြင်လိုက်ပါ။
spamware ဒုက္ခပေးမှုမှ ကင်းဝေးကြပါစေ။
ဘလော့လာဖတ်သူအားလုံးကို နှစ်သစ်မင်္ဂလာပါလို့ ပထမဦးစွာကြိုပြီး နှုတ်ခွန်းဆက်ပါရစေ။ ကျွန်တော့်ဘလော့မှာ ဒီနှစ်အတွင်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပို့စ်တွေ သိပ်မရေးဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း တလက်စတည်း တောင်းပန်ပါရစေခင်ဗျာ။ မင်္ဂလာမြန်မာနှစ်သစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ ပို့စ်တွေ ပုံမှန်တင်နိုင်အောင် ကျွန်တော် ကြိုးစားသွားပါမယ်။ နောက်ပြီး လန်ဒန်မှာနေတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက် အသုံးဝင်မည့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုကိုလည်း လွှင့်တင်သွားဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ ဆက်လက်စောင့်မျှော်ရင်း အားပေးကြလိမ့်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။
ယခုနှစ် မြန်မာနှစ်သစ်ကူးကာလမှာတော့ ထွေထွေထူးထူး ဘာမှလုပ်ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူး။ လန်ဒန်သင်္ကြန်ပွဲနေ့ (၁၆.၀၄.၂၀၁၁) မှာတောင် အလုပ်ကနေ နေ့တစ်ဝက်ပဲ ခွင့်ရတဲ့အတွက် အရင်နှစ်တွေကလို ဓာတ်ပုံတွေ စုံလင်အောင်ရိုက်ပြီးတင်နိုင်မယ်မထင်တော့ပါဘူး။ နောက်တစ်ခါ ကင်မရာကောင်းကောင်းဝယ်ပြီးတော့မှပဲ လန်ဒန်က ပုံတွေကို တဝကြီး ရှူ့စားပါလို့ ပြောပါရစေ။
နလန်ထူခါစ လူနာတစ်ယောက်လိုဖြစ်နေပြီး အခြေအနေအားလုံး ပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင် တည်ဆောက်နေရတဲ့အတွက် ဘလော့မှာ ပို့စ်တွေ သိပ်မရေးဖြစ်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ အလွယ်တကူ sharing လုပ်လို့ရတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ Facebook မှာတော့ အသုံး…
ipad2ကိုမနေ့ကစတင်ပြီး launch လုပ်လိုက်ပါပြီ။ အသစ်မှာဘယ်လို Features တွေထပ်ပါလာသလဲ။ ဘာတွေပိုကောင်းလာသလဲဆိုတာ အောက်ပါ Video နှင့် ပုံကိုကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါတယ်။ Speed နှင့် Weight ကတော့ သိသိသာသာ ကွာခြားသွားပါတယ်။
Adobe Photoshop Extended CS5 Crack and Serial
Adobe PS CS5 Installer
( must register an account, don't worry its free)
1. Download Setup from adobe website.
3. Run Activation Blocker (Run as admin vista/W7)
4. Install usingaserial from below.
5. Copy and paste the crack in the following folders.
32-bit: (C:)/Programfiles/Adobe/Adobe Photoshop CS5
64-bit: (C:)/Program files/Adobe/Adobe Photoshop CS5
(C:)/Program files(x86)/Adobe/Adobe Photoshop CS5 5. Your Welcome.
The Celebration of 50th Anniversary of Kachin Revolution Day
Date: 05 - 02 - 2011
Places: Montague Public Hall, 30 Montague Road, Hounslow, London, TW3 1LD, UK
Kachin Foods and drinks will be served. Contacts: Mr Christopher Ring Du rdlachyung@gmail.com
64th Anniversary of Mon National Day - UK
ယူကေနိုင်ငံရောက် မွန်တိုင်းရင်းသားများ၏ (၆၄) ကြိမ်မြောက် မွန်အမျိုးသားနေ့အခမ်းအနားကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါ၍ လူကြီးမင်းကိုယ်တိုင် ကြွရောက်အားပေးပါရန် လေးစားစွာဖြင့် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
ယခုနှစ်ကျင်းပသည့် မွန်အမျိုးသားနေ့သည် လန်ဒန်တွင် (၁၀) ကြိမ်မြောက်တိုင် ကျင်းပနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အချိန် ညနေ (၅) နာရီမှ ည (၁၁) နာရီထိ
နေရာ Feltham Assembly Hall, Feltham Park, Hounslow Road Feltham, Middlesex, London, TW14 9DN
မွန်တိုင်းရင်းသားရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုအကများ၊ ခေတ်ပေါ်တီးဝိုင်းတို့ဖြင့် ဖျော်ဖြေတင်ဆက် မည့်အပြင် အများနှစ်သက်စေမည့် MON Traditional Fashion Show အစီအစဉ်ကိုလည်း ထူးခြားစွာ ထည့်သွင်း တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါသည်။
ရိုးရာအစားအသောက်များကို ရံပုံငွေအဖြစ် ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပြီး ရံပုံငွေများကို မြန်မာပြည်တွင် ထောက်ပံ့မှုအားနည်းနေသည့် ပရဟိတဂေဟာများသို့ လှူဒါန်းသွား မည်ဖြစ်ပါသည်။
SPDC s Military Conscription Law
2011 လန်ဒန်သင်္ကြန် ဖိတ်စာများ
2011 လန်ဒန်သင်္ကြန်အတွက် ဖိတ်စာ၊ လက်ကမ်းစာစောင်နှင့် Social Networking site များအတွက် Badge များကို ဒီနေ့ပြုလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သာသနရံသီကျောင်းမှ ဦးဆောင်ကျင်းပသည့် လန်ဒန်တွင် အစည်ကားဆုံးသင်္ကြန်ပွဲကို လာမည့် ဧပြီလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖိတ်စာတွင် ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။
Sharing: မစိုးရိမ်ဆရာတော် မိန့်ကြားတော်မူသော "အကြ...
Facebook နှင့် Twitter တို့ကြောင့် ပင်ကိုယ်သရုပ်ေ...
Burma Event: Myanmar Christian Fellowship's Myanma...
Burma Event: Demonstration at German Embassy on 8 ...
Be aware of Facebook Survey Scam : "How to see who...
The Celebration of 50th Anniversary of Kachin Revo...